Basket-ball lalaovin’olona telo :: Lasan’ny Coup de Pouce sy Avengers ny amboara • AoRaha
Basket-ball lalaovin’olona telo Lasan’ny Coup de Pouce sy Avengers ny amboara
Nifamotoana tany amin’ny Village Touristique, tany Mahajanga, ireo mpankafy sy mpilalao ny basket-ball nanomboka ny faran’ny herinandro lasa teo. Nampivondronan’ny fikambanana sy ny Federasiona malagasin’ny baske-tball tao anatin’ny fifaninanana basket-ball lalaovin’olona telo na « Big Sôma 3X3 » izy ireo.
« Fampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ary ny varotra no tanjona amin’ity hetsika ity », hoy Randrianjafy Crépin, mpikambana ao amin’ny Big Sôma Mada. Lasan’ny Coup de Pouce sy Avengers ny amboara teo amin’ireo ekipa efapolo nandray anjara.
Nandavo ny Maqua tamin’ny isa 10 noho 9 ny Avengers teo amin’ny lalao famaranana. Nanilika an’ny JSB kosa ny Coup de Pouce tamin’ny isa 6 noho 2. « Manomboka tsikelikely manitatra ny taranja basket-ball lalaovin’olona telo izahay. Isan’ny fanehoana ny fiaraha-miasa amin’ny ligim-paritra ny hetsika toa izao », hoy Randriana Mihary, tompon’andraikitra amin’ny fampivelarana ny basket-ball ho an’ny rehetra ao amin’ny Federasiona malagasy.
Tsipy kanetibe – « Mondial » Ambivitry ny fihintsanana sahady ny Malagasy
Fifaninanana « han­di­sport »
Basket-ball – Amboaran’i Afrika Votsotra tamin’ny Mb2all ny fampiantranoana ny fifaninanana
Baolina kitra – Barea any ivelany :: Nisongadina ny ekipan-dry Morel sy Dupuis ary Abel Anicet